St. Regis San Francisco waxay ku dhawaaqaysaa xirmo cusub oo aad u fiican oo ah “Qaado Duulimaad”
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » St. Regis San Francisco waxay ku dhawaaqaysaa xirmo cusub oo aad u fiican oo ah “Qaado Duulimaad”
kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
St. Regis San Francisco, cinwaanka ugu sarreeya magaalada ee hoyga raaxada, adeegga naxariista iyo xarrago la'aanta, ayaa ku dhawaaqday xirmo cusub oo loogu talagalay dadka socotada ah iyo dadka maxalliga ah ee doonaya hoy wanaagsan iyo sidoo kale waaya -aragnimada gaarka ah ee dooxada Napa ee quruxda badan.
Hantida ugu qaalisan ee San Francisco waxay lammaaneysaa hoy qurux badan oo leh waayo -aragnimo u gaar ah Dooxada Napa ee BRION iyo Napa Valley Aloft.
Xirmadan cusub ee xiisaha leh waxaa loogu yeeraa "Qaado Duulimaad."
Xirmadaan raaxada leh waxaa ka mid ah gaadiid -kaxaynta, raaxada cunnada ee xarrago leh, iyo xitaa fuulitaanka buufinta hawada kulul ee gaarka loo leeyahay.
Xirmada cusub ee “Qaadashada Duulimaadka” ee guriga waxaa ka mid ah joogitaanka laba habeen mid ka mid ah St. Regis San FranciscoMeelaha raaxada leh ee Metropolitan, gaadiidka qaaliga ah ee sedan ee u socda kana imanaya Dooxada Napa ee ay bixisay Bali , Ah St. Regis aragnimo geeduhu quraac xarrago leh, edeb kortaan buufin hawada kulul ee gaarka loo leeyahay ee Dooxada Napa Aloft, iyo waayo -aragnimo dhadhamin gaar ahaaneed oo heer sare ah oo ku taal Napa ee khamriga raaxada ee ugu cusub, BRION.
“St. Regis San Francisco waxay si gaar ah ugu taal dadka socotada ah ee u hamuun qaba inay la kulmaan farshaxanka firfircoon ee magaalada hoose ee San Francisco, cunnada iyo dhaqanka nolosha habeenkii iyo sidoo kale quruxda dabiiciga ah, khamriga wanaagsan iyo deggenaanshaha dooxada Napa,” ayuu yiri Lilian Wagner, Agaasimaha Iibka iyo Suuqgeynta loogu talagalay hoteelka. “Waan ku faraxsanahay inaan iskaashi la yeelanay ganacsiyadaan dooxada Napa ee la mahadiyey si aan martida u siino fursad ay kula kulmaan waxa ugu fiican“ magaalada ”iyo“ dalka ”labadaba.
Martida ballansan baakadda “Qaadashada Duulimaadka” waxay bilaabi doonaan joogitaankooda San Francisco, oo ah magaalo la mid ah nimcada, qaabka iyo dhaqanka. Markay yimaadaan St. Regis San Francisco, waxay ku nasan doonaan mid ka mid ah hoteellada cusub ee dib -u -habeynta lagu sameeyay, waxay ku farxi doonaan qaab -dhismeedka hoose ee hantida, waxayna ka heli doonaan talooyin kooxda hantida ee Les Clefs d'Or oo u oggolaan doonta inay naftooda ku dhex milmaan Soojiidashada ugu wanaagsan, makhaayadaha iyo machadyada farshaxanka ee ku yaal agagaarka SOMA (Koonfurta Jidka Suuqa).
Subaxda hore, darawal ayaa sugi doona inuu martida u qaado Dooxada Napa, oo lagu yaqaan boqolaal beerood oo canab ah oo buuraley ah oo deggan iyo gobolka khamriga ee dunida caanka ka ah. Joojinta ugu horreysa ee maalinta waa Dooxada Napa Aloft, oo ku taal taariikhaha Guriga Yountville. Marka qorraxdu soo baxdo, martidu waxay bilaabi doonaan raacitaanka buufinta hawo kulul oo khaas ah waxayna ka sara mari doonaan muuqaalka muuqaalka leh ee aagga. Markay soo degaan, waxay ku raaxaysan doonaan quraac quraac oo si gaar ah loo diyaariyey kooxda cunnada ee St. Regis.
Intaa ka dib, martidu waxay u jihaysan doonaan BRION, calanka Napa Valley winery oo ka yimid milkiilaha Brion Wise oo ku yaal Vineyard Sleeping Lady oo ku taal koonfurta magaalada Yountville. U heellan soo-saaridda beer-keli-keli ah Cabernet Sauvignon iyo muujinta himilooyinka Mr. Wise iyada oo la uruurinayo khamriyo gacmeedyo fara badan oo laga sameeyay goobo canab ah oo gaar ah oo ku yaal Dooxada Napa iyo Sonoma, martidu waxay filan karaan inay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo khamri oo aad loo daweeyey ka hor inta aysan dib ugu laaban St. Regis San Francisco.
St. Regis San Francisco waxay bixisaa 260 qol iyo suuliyo, kuwaas oo dhammaantood dhawaan dib u sawirtay shirkad caan ah oo fadhigeedu yahay Toronto oo la yiraahdo Chapi Chapo. Theredesign ayaa sidoo kale diiradda saarey kor u qaadista St. Regis San Francisco ee 15,000 cagood oo laba jibbaaran oo ah goobaha shirarka iyo munaasabadaha, abuurista aagag la safeeyey, raaxo leh oo hal -abuur leh oo loogu talagalay in lagu fududeeyo wada -hadalka iyo wada -shaqaynta.
Qiimeynta xirmada “Qaadashada Duulimaadka” waxay ka bilaabataa $ 12,985.00. 14 maalmood oo ogeysiis hore ah ayaa looga baahan yahay ballansashada, waqtigaas oo aan la soo celin doonin, lacag-bixin hore oo buuxda. Taariikhaha madoobaadku way khuseeyaan, oo ballansashada ayaa la heli karaa hadda ilaa Diseembar 20, 2021. Boos -qabashada ama weydiimaha, fadlan ka wac waaxda Reservations -ka ee hoteelka 415.284.4009.